Announce – Maskandi Media
Dlubheke – “Ngizogadla bevikile kulonyaka”
Kuzobe konakele kakhulu mhlaka 2 November njengoba izinkunzi zomculo wesintu kanye nabathile abasuka kweminye imkhakha bezobe beshiyelana inkundla emcimbini kaNgizwe Mchunu. Umculi osavunywe umhlaba wonke, ikakhulu endimeni kaMaskandi ngokushaya u-LIVe, uDlubheke Khuzwayo uthi akezugcina ngokukwenza lokho akadume ngakho kuphela kepha uzophinda adedele icwecwe lakhe elisha.
“Ngifuna ukushaya la bevike khona kulo nyaka. Kuyaye kufuneke sengathi ungavusa izinsizwa ezashaya ingoma nami ngazivuma uma uzokwazi ukumelana nale ngoma engiza nayo kulokhu. Ngikhumbula izinsizwa ezifana naboMuhle umfoka Khuzwayo, nezinsizwa ezifana nabo Kwakhe ngoba akuyona ingoma kodwa inkamba beyibuza le”.
“Njengenkosi ka-LIVE, ngizofika eThekwini emcimbini kaNgizwe ngizwise abantu ukuthi u-LIVE udlalwa kanjani maqede ngibanike umsebenzi wami omusha. Ngijabuliswa ukuthi izwe selivumile ukuthi ubani ophethe kulento yokudlala bukhoma. Bese kuba ukuthi le ngoma engiza nayo kulokhu angifune mfana ozonconywa engenze lutho njengenhlala yenza ngoba eyami izobe ingacicizi kodwa ihlala ngqo ekhanda lendoda”.
“Ngifisa sengathi ungahamba kahle umcimbi wale nsizwa ngoba bazokhumbula abaningi ukuthi imina umculi owaphumela obala kuqala wezwakalisa ukukhala kwakhe ngokuhamba kukamfoka Mchunu oKhozini. Ngiyathokoza uma ngimbona esalokhu eyibambe njalo njengenkosi yamabhinca nakuba kunzima kodwa uwa evuka nomculo wethu”. By Dlubheke Khuzwayo.
Dumakahle 2019 – 27 September
Sekuvele konakala ezindimeni zomculo wesintu njengoba umculi onguntandokazi ngenxa yengoma yakhe enomlayezo sekumenyezelwe ukuthi iphuma nini. Lo mculi uqale ngokuxolisa kakhulu njengoba ithathe isikhathi eside ukuthi iphume wabe esethi okumjabulisayo ukuthi ifezekile inhloso yakhe yokushaya ingoma esezingeni eliphezulu.
“Ngiyaxolisa kakhulu kubathandi bomculo ngokuthatha isikhathi eside ukuthi ngibazwise ingoma ekade beyilindele”.
“Usefikileke manje uMaphathefika uthisha wothisha. Icwecwe lami elisha lizophuma mhlaka 27 September 2019. Bayazike abathandi bomculo ukuthi angigcini icala uma ngibhala. Lokhu abakuzwa kwabachaza bakuncoma ngonyaka odlule kuzobe kuphindaphindiwe kulokhu. Kungiphatha kabike nokho ukuzwa abantu abayiphoqayo lento bedlala ngezindlebe zabathandi bomculo”.
“Mina angizelanga ukuzobhora abantu kodwa ngizobanika lokho okubafanele ngoba bangabelungu bethu. Kungangithokozisa kakhulu ukubabona bengixhasa ngama CD angama original. Njengoba izophuma nje le CD, ngizocela kakhulu kubathandi bomculo ukuthi bengamukele njengoba benza ngonyaka odlule”.
“Kubuhlungu bafwethu ukuzwa ingoma yakho idlalwa umhlaba wonke kubatshazwa ubukhulu bengoma yakho kodwa kube kungaqhubeki kahle emakethe. After all iyona ndlela esiziphilisa ngayo lena yekhono esazalwa nalo. Asiyanga kumlungu ngoba saphiwa ikhono kwathiwa sophila ngalo siphiwa umdali”.
“Mhlaka 27 September ngizocela ukuthi kubreakeke irecord, imane idayise kakhulu ngosuku ephume ngalo le CD ngoba cha, hhayi noKhuzani umfoka Mpungose uncoma nje yingoba uzwile ukuthi kuqukethweni laphana”. By Dumakahle.
Kuqhathwe izinkunzi enyuvesi
Kuzobe kudedelwe udedi enyuvesi yakwa Zulu-Natal mhlaka 7 September 2019. Amaciko kaMaskandi esingabala kuwo uNavigator Gcwensa, Khuzani Mpungose, Mzukulu, Ntencane namanye amaningi athokozile kakhulu ngokuqhathwa nezinkakha ezihlonishwayo endimeni yomculo wonke jikelele kulele.
“Kungithokozisile kakhulu ukuthola ithuba lokugijimisana nezinkunzi ezaziwayo nezihlonishwayo endimeni yomculo kuleli. Ngiyethemba umcimbi uzohamba kahle kakhulu njengoba uzobe uphethwe ilowo owake waba umsakazi kaSgiyangengoma oKhozini u-BK”.
“Ngizocela kubathandi bomculo wami ukuthi befike ngobuningi ukuze loya mcimbi uzobonisa ukuthi nathi kule ndima yomculo asibancinyana. Zobe zididyelweke e-Gate 10, kula esohlangana khona nezami”. Kusho uNavigator Gcwensa.
UKhuzani unxuse ama-Blue Nation onke eThekwini namaphethelo ukuthi aphume ngobuningi ukuze umcimbi uzobonisa ubukhulu bale ndima yomculo.
“Ukufika kwabo ngobuningi buzokwenza ukuthi lento ingene igxile nasezinhliziyweni zamanye amastudents ukuthi umculo wethu lona ungene shi entsheni nabo bewuthande. Kungiphatha kahle ukuthi sizobe sididiyelwe nezinye izindima zomculo okusho ukuthi kobe kukhona yonke inhlobo yomlandeli”. Kusho uKhuzani.